Isitolo esidayisa yonke impahla alahlwayo one-piece isolation gown manufacturers and suppliers | qiangwei
Kulahlwa ingubo eyodwa yokuhlukanisa
1. Ingubo ehlanganisiwe yokuhlukaniswa, eyenziwe ngendwangu yokuluka engeyona eyelukiweyo + Indwangu yefilimu ephefumulayo, ukukhanya, okuphefumulayo, okungangenwa manzi, indwangu emhlophe, isisindo segramu 63g / ㎡, izinga lokumelana nomswakama ongaphezulu 4, ukumelana kwamanzi> 10Kpa, izinga lokumelana nomswakama womhlaba 4 .
2. Umklamo wonke ofakwe izigqoko wenziwe ngokuthungwa kwesikhwama, ngaphandle kokuvuza kwesinaliti, ukuhlukaniswa kwezinaliti okungu-10-14 kuyo yonke i-3cm, umfaniswano kanye nomkhondo wentambo oqondile, ayikho inaliti yokweqa, nokuhlukaniswa okusebenzayo kwezinhlayiya ezinhle. Ikhafu, unyawo nekepisi ziyaguquguquka futhi kulula ukuzigqoka futhi zikhumule. Isinqe yintambo enwebeka, elungele izinombolo ezahlukahlukene zokugqoka.
3. Uziphu wangaphambili ochopho, itheyiphu yokunamathisela emaceleni amabili yeflegi yangaphandle, ukubekwa uphawu okuhle.
4. Umkhiqizo uhlanganiswe ngokuzimela, usetshenziswe kanye futhi ubhujiswe ngemuva kokusetshenziswa. Iyadicilela phansi futhi inobuhle bemvelo.
5. Umkhiqizo uzogcinwa endaweni eyomile, enomoya futhi engonakalisi ekamelweni lokushisa, isikhathi esiyizinyanga ezingama-24 sisebenza ngokusemthethweni.
6. Sicela uqinisekise imvelo oyisebenzisayo ngaphambi kokuyisebenzisa. Inkampani yethu ngeke ithwale icala nganoma yimuphi umonakalo odalwe ukweqa ukusetshenziswa noma ukusetshenziswa kwemikhawulo yalo mkhiqizo.
7. Lo mkhiqizo uyashisa. Sicela ugcine kude nomthombo wokushisa bese uvulela umlilo lapho usebenzisa noma ugcina.
8. Bheka isitifiketi ukuthola imininingwane, usuku lokukhiqiza nenombolo ye-batch.
9. Kunconywa ukuthi ungasithinti isikhumba bese usigqoka ngaphezu kwamahora angama-24.
10. Umkhiqizo uhlukaniswe nge-XS / S / M / L / XL / XXL, ene-moQ yezingcezu eziyi-1000, izingcezu ezingama-50 / ibhokisi, kanye nesisindo esikhulu sika-0.24kg ngocezu ngalunye. Ukusekela ngokwezifiso, kunganikeza ngamasampuli ama-2, umjikelezo wokulethwa omfushane.
Lo mkhiqizo usetshenziselwa izikhungo zezokwelapha ezenzelwe iziguli ezingalali, iwadi, ilabhorethri nokunye ukuhlukaniswa okuvamile okulahlwayo okungahlukaniswanga okungahlukanisi nezimpahla zomuntu.
Langaphambilini Amajakhethi wangaphandle
Olandelayo: Izinga lezingubo zokuhlukanisa 1
Izingubo Zokuvikela Ezokwelapha
Izinga lezingubo zokuhlukanisa 1
Izinga lezingubo ezihlukanisiwe 2